बिज्ञान प्रबिधि – Eps Sathi
प्रविधिको विकास भएसँगै मौलाएका वित्तीय अपराधका प्रवृत्तिमा पनि व्यापक विस्तार भएको छ र त्यसैको एउटा कडीका रूपमा हाइपर फन्डमार्फत विगत केही वर्षदेखि शुरू भएको ठगी पनि एक हो । हाइपर फन्ड नाम गरेको प्रच्छन्न मुद्रामा लगानी गरी उच्च प्रतिफल दिने घोषणासहित मानिसहरूलाई ठग्ने काम भइरहेको र यो योजनाको पिरामिड प्रवृत्तिको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई अर्को प्रकारको ‘पोन्जी स्किम’ मान्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत नयाँनयाँ लगानीकर्तालाई फसाउँदै लगिन्छ र तिनीहरूबाट प्राप्त हुने रकम पुराना लगानीकर्तालाई ‘प्रतिफल’ भन्दै वितरण गरिन्छ । जबसम्म नयाँ लगानीकर्ताहरू यस्तै प्रलोभनमा परेर लगानी गरिरहन्छन् तबसम्म त यस्तो ठगीकर्म जेनतेन ‘जीवित’ रहला, तर जुन दिन नयाँ लगानीकर्ता यसप्रति आकर्षित हुन छोड्छन्, तब यस्तो ‘ठगीको पिरामिड’ स्वतः भताभुंग हुन पुग्छ र त्यो अवस्थामा पछिपछि लगानी गर्नेहरू सबैभन्दा बढी शिकार हुन पुग्छन् । हु
दक्षिण कोरियामा फा'इटर जेट दु'र्घट'नामा परेको छ। कोरियाको एअर फोर्स 'एफ-५इ' नामक जेट दुर्घ'टना हुँदा जेटका चालकको नि'ध'न भएको हो। कोरियाको केन्द्रिय क्षेत्रमा मंगलबार यो घ'टना घ'टेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जानकारी दिएको योनहाप न्युज एजेन्सीले बताएको छ। कोरियाको राजधानी सउलबाट ४० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने ह्वासङ क्षेत्रमा रहेको एउटा पहाडमा दु'र्घट'ना भएको हो। स्थानिय समय अनुसार दिउँसो १ बजेर ४६ मिनेट जाँदा घ'टना घ'टेको हो। सुवनमा रहेको एअर फो'र्स बेस क्याम्पबाट उडेको केहि समय पश्चात नै जेट दु'र्घट'नामा परेको थियो। "सुवनको एअर फो'र्स बेस क्याम्पबाट उड्दा इन्जिनमा फा'यर वार्निङ लाइट बलेको देखिएको थियो। यस्तो सिग्नल १ बजेर ४४ मिनेटमा देखिएको थियो भने उडेको केहि मिनेटमै जेट जमिनमा जोतिन पुगेको थियो।" कोरियाको एअर फो'र्सले निकालेको प्रेश बिज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ। जेटमा रहेका पाइलट क्य
त्तर कोरियाले ध्वनिको भन्दा पाँचगुणा तीव्र वेगको एउटा ‘हाइपरसोनिक’ क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको त्यहाँको एउटा सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । नयाँ वर्ष शुरु भएयता उत्तर कोरियाले गरेको यो प्रमुख अ'स्त्र परीक्षण हो। सरकारी समाचार संस्था केसीएनएका अनुसार उक्त क्षेप्यास्त्रले ७ सय किलोमिटर परको निसानामा ’ठ्याक्कै प्रहार’ गरेको थियो । यो हाइपरसोनिक क्षे'प्यास्त्रको दोस्रो परीक्षण हो । हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रलाई पहिचान गर्न बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रभन्दा बढी समय लाग्ने विज्ञ बताउँछन् । प्योङयाङको सै'न्य सामथ्र्य अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता किम जोङ उनले गरेसँगै यसको परीक्षण भएको हो । नयाँ वर्षको सम्बोधनमा किमले कोरियाली प्रायद्वीपको अस्थिर सैनिक वातावरणका कारण प्योङयाङले आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता अभिवृद्धिलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए। दक्षिण कोरिया–अमेरिका वार्ता स्थगित भइरहँदा उत्तर
यो बस पनि हो अनि ट्रेन पनि हो। यो 'डी एम भि' हो। विश्वकै पहिलो दुइ किसिमको गाडी अर्थात डुअल मोड भेइकल जापानले बनाएको छ। यो गाडी रेलको लिकमा पनि दौडन्छ भने बाटोमा गुड्दछ पनि। यस्तो गाडी जापानमा शनिवारबाट सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि खुला गरिसकिएको छ। जापानको टोकुशिमा प्रिफेक्चरको काइयो शहरमा शनिवारबाट प्रयोगमा ल्याइएको हो। डबल मोड अर्थात बस तथा रेल मिश्रित यो गाडी हर्दा मिनिबस जस्तै देखिन्छ। सामान्य बाटोमा रबरको टायरको प्रयोग गरी गुड्दछ भने जब रेलको बाटो आउँदछ तब स्टिलको पाङ्रा निकालेर रेलको लिकमा तुफान दौडन्छ। रेलको लिकमा पुगेपछि एकाएक रेलजस्तै काम गर्छ। रेलजसरी नै तुफान दौडन्छ। ट्रेनको पाङ्रा झारेर रबरको टायरलाई माथितिर तानिन्छ र पछाडीको टायरको सहायताले गाडीलाई बिस्तारै रेलको लिकमा चढाईन्छ। यस किसिमको हाइब्रिड गाडी सन्चालन गर्ने आशा कोस्ट रेलवे कम्पनीका सिइओका अनुसार यस किसिमको गाडीले
काठमाडौं । आफ्नै प्रेमी पाइलटले विमानमा गरेको घोषणा सुनेर उडानमा रहेकी एक युवती लाजले भुतुक्कै भएको भिडियो अहिले चर्चित छ । इन्टरनेटमा भाइरल यो भिडियोलाई अहिलेसम्म एक करोडभन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ । पाइलट प्रेमीले विमानमा पहिलो पटक चढेकी आफ्नी गर्ल्फ्रेन्डको बारेमा गरेको घोषणाले उनलाई अन्य यात्रु समक्ष लज्जित हुनु परेको थियो । यो भिडियोलाई टिकटकमा सेयर गर्दै हना नामकी एक युवतीले लेखेकी छन्, ‘जब तपाईं पहिलो पटक आफ्नो ब्याइफ्रेन्डको विमानमा उडान भर्नुहुन्छ…’ विमानमा बसेका यात्रुलाई जरुरी सूचना दिनुअघि पाइलटले भनेका थिए- ‘हामीसँग एक जना विशेष व्यक्तिले यात्रा गर्दै छन्, जो मेरी प्रेमिका हुन्, उनको नाम हना हो र उनी सीट नम्बर २’सी’मा बसेकी छन् । त्यसैले, तपाईहरूको यात्रा समाप्त भएपछि मेरो एक काम गरिदिनु होला ।’ त्यसपछि पाइलट ब्वाइफ्रेन्डले आग्रह गर्दै भने, ‘फिस्ट बम्प, हाइ फाइव वा आफ
अब टिभिमा विभिन्न कुकिङ च्यानलमा मिठा मिठा खानेकुरा हेर्दै यसको स्वाद कस्तो होला? खान पाए पनि हुने? भन्दै थुक निल्दै बस्ने दिन गएको छ। अब टिभीको स्क्रिनमै चाटेर उक्त खानेकुराको स्वाद लिन मिल्ने टिभी जापानले बनाएको छ। यस्तो किसिमको टिभी जापानका एक प्रोफेसरले विकास गरेका हुन। जापानी प्रोफेसरले यस किसिमको सुविधा भएको टिभीको प्रोटोटाइपको विकास गरेका हुन। यसको व्यवसायिक रुपमा उत्पादन भने भइसकेको छैन। चाट्न मिल्ने टिभी अर्थान स्क्रिन चाटेर खानेकुराको स्वाद लिन सकिने यस किसिमको टिभीले खानेकुराका विभिन्न स्वादहरु दिने गर्दछ। यस्तो टिभिमा स्क्रिनमा देखिने खानेकुराको स्वाद लिनका लागि टिभि स्क्रिन चाटे मात्रै पुग्दछ। यस किसिमको प्रोटोटाइप टिभिको नाम 'टिटिटिभी' अर्थात 'टेष्ट द टिभी' दिइएको छ। यसमा १० किसिमका भिन्न भिन्न स्वाद भएका कन्सिस्टरहरु जडान गरिएका छन जसले स्क्रिनमा देखिएको खानेकुराको स्व
दक्षिण कोरियाको दोश्रो ठूलो शहर बुसान शहरले समुन्द्रमा बस्ति बसाल्ने एकदमै महत्वकाँक्षी योजना सुरु गर्न लागेको छ। बुसानले अर्को बर्षबाट यो महत्वाकाँक्षी योजना अघि बढाउने भएको छ। यस सम्बन्धि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय चलनहरुको अध्यन पछि बुसान शहरले "समुनद्रमाथि तैरिने मानववस्ति" को अवधारण अघि बढाउन लागेको हो। यो योजनका डिजाइनर इन्जिनियरहरुका अनुसार यो वस्तिमा कम्तिमा पनि १० हजार मानिस बसोबास गर्न सक्नेछन भने यस्तो योजनाले सामुन्द्रिक किनारामा रहेका वस्तिहरुका लागि राम्रो विकल्प दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस योजनलाई 'ओसनिक्स' नाम दिइएको छ। यस योजनामा डिजाइनरहरु, आर्किटेक्टहरु तथा इन्जिनियरहरु लागेका छन। उनिहरुले सन २०१९ मै यस्तो योजना अघि सारेका थिए। उनिहरुले गत महिनामात्र बुसान सरकार र युएन हेबिट्याट सँग यस परियोजनालाई अघि बढाउन सम्झौता गरेका थिए। यस परियोजनामा बन्ने घरहरु समुन्द्रको पानीक
वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न देश पुगेर स्वदेश फर्केका नेपाली युवाहरु अहिले आफ्नै देशमा स्वरोजगार हुनुका साथै अन्य थुप्रैलाई रोजगार समेत दिने स्थितिमा पुगेका छन। यस्तै शिलसिलामा कोरिया पुगेर त्यहाँ रोजगार गरि नेपाल फर्केका थुप्रै युवाहरु नेपालमा सफल व्यवसायीका रुपमा चिनिन थालेका छन। बैदेसिक रोजगारिको सिलसिलामा करिब पाँच बर्ष कोरियामा बसेर फर्कनुभएका सितापुर टीकापुर कैलालीका शिवराज जोशीले आफ्नै घरम डटपेन उत्पादन सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले कोरियामा हुदां सिकेको सीपलाई नेपालमा आएर प्रयोग गरेको बताउनुभयो। खाली समय बसेर दिन कटाउनुभन्दा सिमेको सीपलाई उचित प्रयोग गर्न उपयुक्त ठानुभयो र काम अगाडि बढाउनुभयो। टीकापुर लगायत आसपासका क्षेत्रमा डटपेनको अधिक माग रहेको कुरा महसुस भएर डटपेन उत्पादनमा लागेको बताउनुभयो। हाल डटपेन उत्पादनमा लाग्ने मेसिनसँगै कच्चा पदार्थ र मसि लगायतका साममन भारतबाट ल्याएर
धेरै नेपालीहरुले आफ्नो लगानी लगाएको ने’टवर्कि’ङ शैलीको ‘हाइपर फन्ड’ भनिने भर्चुअल लगानीको प्लेटफर्म अहिले डु’ब्यो भन्ने ह’ल्लाले बजार तातिएको छ। लगानी गरिसकेका, गर्न खुट्टा उचालेका र लगानी गरेर धेरथोर प्रतिफल चाखिसकेकाहरू हाइपर फन्डमा मात्रै आ’कर्षि’त छैनन यस्तै भर्चुअलशैलीका जोसि’यल, सोले म्याक्स, क्राउड वान, सीआरयू, विन्टर जस्ता दर्जन भन्दा बढी प्लेटफर्मतर्फ ता’निइरहेका छन् । पछिल्लो समय अन्य प्लेटफर्मभन्दा हाइपर फन्डमा आ’क’र्षित हुने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ ड’लरमा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि नेपालभित्रै र प्रवासमा रहेका नेपालीमाझ यसको आ’क’र्षण बढ्दो छ । केहि समययता हाइपर फण्डको अफिसियल साइट नखुल्ने गरेको, एमओएफ हराएको, एमओएफ एक्सचेन्ज गर्ने अप्सन नदेखिएको हुँदा यसमा लाखौं पैसा लगानी गरेकाहरु आ’त्तिएका छन। तर हाइपर फण्डमा लामो समयदेखि लगानी गरि काम गरिरहेका टिम लिडर भनिनेहरुका अनुसार अ
ड्राइभर बिनाका कारले अब कोरियामा यात्रु बोक्ने, यहि हप्ताबाट यो सेवा सुरु हुँदै
विश्वका कतिपय देशहरुले अझै पनि कल्पनासमेत नगरेको कुरा दक्षिण कोरियाले पूरा गर्दैछ। विना ड्राइभरका कारहरुले अब कोरियामा यात्रुहरु बोक्नेछन। दक्षिण कोरियाले यसै हप्ताबाट बिना ड्राइभर सेल्फ ड्राइभिङ हुने कारहरु सर्वासाधारणका लागि सन्चालनमा ल्याउने भएको छ। कोरियाले पहिलो पटक राजधानी सउलमा यहि हप्ता यस्ता कारहरु सन्चालनमा ल्याउन लागेको सउल सिटी सरकारले सोमबार जानकारी दिएको छ। यसको सफलतापूर्क सन्चालनसँगै अटोमेटिक गाडीको दुनियाँमा दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्नेछ। सउल मेट्रोपोलिटन सरकारका अनुसार सर्वसाधारणका लागि यहि मंगलबारबाट ३ वटा बिना ड्राइभरका पूर्ण स्वचालित कारहरुले सेवा सुरु गर्नेछन। सउलको पश्चिमी क्षेत्र साङगाम दोङलाई पाइलट जोन निर्धारण गरि यो सेवा सुरु गर्न लागिएको हो। यि ३ वटा पूर्ण स्वचालित कारहरुले डिएमसी स्टेशनबाट यात्रुहरुलाई नजिकैका अपार्टमेन्टहरु तथा अफिसहरुमा पुर्याउनेछन। यस सेव